बाल्यकालमा हावाको फोका जस्तो देखिने तालमा, ५० वर्षपछि खोज गर्दा देखियो यस्तो भयानक दृष्य ! | Rajmarga
बाल्यकालमा हावाको फोका जस्तो देखिने तालमा, ५० वर्षपछि खोज गर्दा देखियो यस्तो भयानक दृष्य !
एजेन्सी।बाल्यकालका कुनै यादहरु निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । युरोपका एक व्यक्तिले आफ्नो घर नजिकै रहेको तलाउमा आफु सानो हुँदा हावाको फोका उठिरहेको देखेका थिए । त्यतिबेला आफु सानो भएको कारण के हो भन्ने थाहा भएन ठूला मानिसहरुले वास्ता गरेनन् । ती व्यक्तिले पनि उक्त कुराको धेरैै समय पछि याद गरे । जब उनी ५० वर्ष भइसकेका थिए ।
त्यसपछि आफुले बाल्यकालमा तलाउमा देखेको हावाको फोकाबारे खोज गर्न थाले । उनको घर नजिकै एउटा विशाल ताल थियो । जहाँ एस्टोनियाको कुर्तना कटास्जर्व तलाउको बीचमा देखेको हावाको फोकाहरु भएको कुरा ५० वर्ष पछि मात्र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरे । उनकोे यो कुरा सुनेर मानिसहरुको ध्यान उक्त तलाउ तिर केन्द्रित भयो । उनको त्यो कुराले मानिसरुको युद्धको इतिहासमा रुचि राखे । त्यसपछि अन्य व्यक्तिहरु अनुसन्धानको लागि तलाउका गए । करिब ८ घण्टाको खोजी पछि उनीहरुले नसोचेको चीज तलाउमा फेला पर्यो ।
तब मात्र थाहा पाएकी त्यहाँ दोस्रो विश्वयुद्धको बेला एउटा लडाकुको ट्यांक त्यहा डुबेको थियो । अनुसन्धानको लागि आएको टोलीले पू्रै तयारीको साथ बूल्डडोजरले उक्त ट्यांक बाहिर निकालेका थिए । उनीहरुको यति लामो प्रयासबाट ट्यांक निकाल्न सफल भएपछि निकै उत्साह मनाएका थिए । करिब ३० टन भन्दा बढी तौल रहेको ट्यांंक रुसमा बनेको हो । जर्मन सेनाले उक्त ट्यांकको प्रयोग गरेका थिए । ५० वर्ष अगाडी तलउमा डुबेको ट्यांकको इन्जिन अझै पनि काम गरिरहेको छ । अहिले उक्त ट्यांक सैन्य संग्राहलयमा राखिएको छ ।
Previous post: धम्क्यउनेलाई जेलः कोहिसँग पैसा उठाउनु छ भने होसियार !
Next post: निर्मला हत्या प्रकरणः एसपी डिल्लीराज विष्टको डीएनए मिलेन